Dalxiiska Samoa wax badan ayaa looga mahadcelinayaa Japan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jaban ee Japan » Dalxiiska Samoa wax badan ayaa looga mahadcelinayaa Japan
Jebinta Wararka Safarka • saaciday inay • Wararka Dowladda • Investments • Wararka Jaban ee Japan • News • Wararka Samoa • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Safiirka Japan Aioki wuxuu sheegay in dekedda cusub ee Matautu ee Samoa ay hadda keeni karto Samoa “in badan oo ajaanib dalxiisayaal ah oo jeclaan lahaa dabeecadda quruxda badan, caadooyinka gaarka ah iyo soo dhoweynta wanaagsan ee dadka Samoan.
“Magaalada caasimada ah ee Samoa waxay leedahay xarun deked oo cusub oo laga casriyeeyay magaalada Matautu. Mashruuca US $ 30-million ee lagu hagaajinayo amaanka iyo waxtarka dekada weyn ee Apia ayaa qaatay labo sano waxaana furay todobaadkan safiirka Japan ee Samoa.
Mashruuca waxaa si buuxda u maalgelisay dowladda Japan oo hoos timaadda Wakaaladda Iskaashiga Caalamiga ee Japan.
Dib u cusbooneysiinta waxaa ka mid ah 103-mitir oo lagu kordhiyay barta cusub iyo dayactirka iyo balaarinta marinka cusub ee rakaabka.
Raiisel wasaaraha Samoa Tuilaepa Sailele Malielegaoi wuxuu sheegay in dekedda la casriyeeyay ay ka caawineyso himilooyinka horumarineed ee dowladda “isku xirka safarka gaadiidka ee waara, aaminka ah, bey’ada u leh oo taageera Samoa horumarka dhaqaale iyo bulsho.
Port Apia waxay maamushaa ku dhowaad 97% dhammaan badeecadaha shisheeye ee looga ganacsado Samoa.